Kaungphyo's Weblog | Just another WordPress.com weblog
တဝေါဝေါရေတံခွန်လို တ၀ုန်းဝုန်းစီးဆင်းနေတဲ့ အင်တာနက်မှာ
ကော်ဖီသောက်လိုက် ၀ီစကီသောက်လိုက် ရေသန့်ဘူးဖောက်လိုက် …
တည်ငြိမ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတတ်တဲ့ စိတ်အတုနဲ့ အလုပ်များသား။
ရွာကအဖွဲ့တွေ အကုန်လာဖို့ လှည်းဆင့်ထားတယ်။
ဘယ်ဟာမှ သယ်မလာဖို့ အီးမေးလ် ၁၀ စောင် ပို့မိရဲ့။
ကိုယ့်ဆရာတို့ မောနင်း …. ပြန်အိပ်လိုက်ဦးမယ်။
မင်းဂွတ်သီးတွေပေါတဲ့မြို့မှာ စီးကရက်တွေပဲ သောက်နေမိတယ်။
၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄
၀၄ ၅၁ AM
Tags: ကဗျာ (Life-Style's Poetry)
အဆင်ပြေလားဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်း မောပန်းပန်းမျှော်မိတယ်။
၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄
ငါ မောပန်းလှပါပြီ ….
ငါ့အတ္တ ငါ့အိပ်မက်တွေပဲလို့ ယိုးစွပ်လိုက်စမ်းပါ။
အလွမ်းဆိုတာ ပြောဖို့တောင့် မသတီစရာကောင်းရဲ့
မာယာကော့ဖ်စကီးနဲ့ အပြိုင် ငါဖျားနေတယ်
နှစ် ၆၀ အနုကြမ်းစီးပစ်တဲ့
ငါ့ အလွမ်း ငါ့မျက်ရည်
၈၈ ကို ငါချစ်တယ်
ငါ့ တော်လှန်ရေး ငါ့ချစ်သူ သြဂတ်စ်။
ငါ မလွမ်းဘူးပြောတော့လဲ နာကျင်စရာများနေလိမ့်။
မင်းရှိတဲ့ ဗမာပြည်မှာ ငါနေတယ်
နီရူဒါ ငါ … ချီလီကိုမလာနိုင်သေးဘူး။
ယက်ဖ်တူရှင်ကာနဲ့ ဇီမာလမ်းဆုံမှာ ဗော့ဒကာသောက်ရင်း
ဗမာပြည်က ချက်အရက်တွေအကြောင်း အိုဘားမား မသိအောင်ပြောမယ်။
အကယ်ရွေ့ တရုတ်မကြီးတွေ ဘုံဆိုင်မဖွင့်ခဲ့ရင်ပေါ့။
မင်းတို့ရဲ့ မရပ်တော့တဲ့ စိတ်အလျဉ်တွေကြားမှာ
ငါတို့ ၀ဲစုပ်ခံခဲ့ရ ခုထိတိုင်
၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄
လေလုံးရိုက်ပုတ် အော်မြည် သွေ့ခြောက်
ဆေးညိုခြယ် တောတန်းချုံစပ် တစ်နံတစ်လျား
ကမ်းလွန်လေ ကဗျာမဂ္ဂဇင်း – အမှတ် (၁)
မျက်နှာဖုံးပန်းချီ – စိုးဝင်းငြိမ်း
ကိုအောင်ဘညို အမှတ် (၁) တစ်အုပ်ပဲ ထုတ်ဝေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟော့ဒီဆယ်စုနှစ်တွေ … စိန်ပန်းနီနီတွေ
ကျော်ကြီး လိပ်စာပြောပါ။ မှတ်တိုင်ပြောပါ။ ဖုန်းနံပါတ်ပြောပါ။
တရုတ်နီ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့က မင်းဆီလာတယ်။
မင်း မလှိုင်မှာရှိနေသေးမှန်း ဒီကောင်သိနေတယ်။
ငါတို့ရဲ့ တစ် နှစ် သုံး၊ အောက်တိုဘာ ၆၄။
နံပါတ်သုံးက မင်းလေ တရုတ်နီ …..
လူကြုံရှိရင် ခဏလိုက်ခဲ့စမ်းပါဦး …
ကျွန်တော့်သားကြီးအားရှိဖို့ ကြက်တစ်ကောင်လုံး ပြုတ်ကြော်လုပ်ပြီး ယူလာတယ်။
အမေကြီး မလှိုင်ကို ခဏခဏလာရလွန်းလို့
အတရား မုံရွာလိုက်သွားတာ ပြန်မလာသေးဘူး။
ငါတို့က သူများတွေလို အဖေလို့မခေါ်ဖူးဘူး။
ငါ့အစ်မ၀မ်းကွဲကို စန်ကြည့်လို့ တရုတ်သံအက်ကွဲကွဲနဲ့
“သွားမယ်ဆိုလည်း ရုတ်တရက်သွားရင် … မျက်ရည်မ၀ဲခင် နှုတ်မဆက်ပဲသွားစေချင်”
ဆရာကြီးဦးထွန်းလှ လေးတိုင်စင်နားရောက်နေတယ်။ သီချင်းသံကြားရတယ်ဟုတ်။
သိန်းငှက်လက်သည်းဖုထစ်ကြီးတွေပြရင်း အစ်ကိုမောင်ငယ်သွေး အက်ကွဲကွဲရယ်တယ်။
ပြီးတော့ “ဟေ့ကောင် ငါအပြန် မြင့်မော်ကြီးဆီ ၀င်ဦးမှာကွ”
ဟာဗျာ အစ်ကိုကလည်း ပုဂံလမ်းမှာ သီချင်းဆိုလို့ရနေပြီဗျ ….
ကိုမင်းလူ ဦးဝဏ္ဏတို့က သိပ်မကြာစေနဲ့တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ရတနာပုံထဲက ခတ်သုတ်သုတ်ထွက်
ငါတို့အိမ်ရှေ့ အမှတ်(၄)လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဥသြသံကုန်ဆွဲလိုက်တယ်။
သင်္ဘောခေါင်းတိုင်ထိပ် မီးခိုးမည်းတွေ တစ်လိပ်လိပ်
မိုးခေါင်ရေရှား ကန္တာရဆူးတွေ လှိုင်းထလာတယ်။
ငါ့ကျောက်ဆူး ဘယ်နားပစ်ချလိုက်ရမှာလဲဟေ့ ….. ….. ….
” ဖြစ်တည်မှုကို မှန်းဆခြင်း ”
ညထဲ ကလေးတစ်ယောက်လို လန်နိုးခဲ့ အခါခါ
ပျင်းရိငြီးငွေ့စွာ ကုန်လွန်လာခဲ့တဲ့ အခါ
ဘာကိုမှ မရဲဝံ့တော့ဘူး ကြောက်တတ်တဲ့လူ …
ကြိုးဝိုင်းမှာ မှောက်ချလိုက်တဲ့သူ အနာသက်သာသတဲ့
ပထမဆုအတွက် အနာခံပြီး လက်သီးတွေနဲ့ ကုန်းရုန်းထ
သွေးစေးနဲ့ဖူးရောင်နေတဲ့ အနာတရ မျက်လုံးတွေက
ဒီလိုနဲ့ပဲ ငါ ဆက်ရှိနေခဲ့
ဒါဟာ ငါဖြစ်နေတယ်။ ။
(မေ၊ ၇၊ ၂၀၀၉)